Ọhụrụ Phising ọgụ spoofing Apple ozi ịntanetị | Esi m mac
Typesdị ozi ịntanetị ndị a abụghị ihe ọhụrụ na ọtụtụ n'ime ha adịla ogologo oge. na-eersonomi nkwado Apple tech iji gwa anyị na akwụsịrị akaụntụ anyị, na anyị ga-ewelite ozi nkeonwe anyị ma ọ bụ mgbaghara ọ bụla ọzọ, ka anyị wee webata site na njikọ ọjọọ gaa na webụsaịtị mpụga, nzere anyị yana na n'ụzọ dị otu a ha nwere ike ịnweta ozi anyị.
Ihe dị mkpa bụ na ọbụlagodi weebụsaịtị nke njikọ ahụ na-ewega anyị nwere ọdịdị dị mma njikọ ziri ezi na weebụsaịtị nkwado Apple na online forums ... Otú ọ dị mgbe ị pịrị na "My Apple ID" ọ na-emegharị gị gaa na adreesị na-enweghị ihe ọ bụla na-eme na ezigbo web.
Naanị m laghachiri n'okwu ahụ n'ihi na dịka ụfọdụ akwụkwọ si kwuo, mwakpo na-abawanye na ọnụọgụ na-esiwanye ike n'ihe gbasara ọdịdị nke email adịgboroja ma ọ bụ weebụsaịtị na n'ezie ị ga-akpachara anya ka ị ghara ịdaba n'ọnyà ahụ.
Ndụmọdụ kachasị dị irè bụ ịlele ogwe adreesị URL mgbe niile tupu ịpị ma ọ bụ nyochakwuo ibe ahụ. Mgbe ị na-enweta email na ọtụtụ nsụgharị nke ngwa Mail, ọ bụrụ na anyị hover na njikọ dị na mpụga, ọ ga-ekpughe URL na ụdị mpịakọta mmapụta. Ọ dị mma karịa tupu ịpị njikọ ọ bụla, Ka anyi jiri aka anyi webata web anyi ma anyi n’eme ya n’enweghi “ewere”.
N'ọnọdụ ọ bụla, nkezi ma ọ bụ ndị ọrụ dị elu agaghị enwe nsogbu ịchọpụta ha ma ọ bụrụ na ị nọrọ na-ege ntị, n'ụzọ megidere onye ọrụ nkịtị Ndị ezubere iche maka ụdị ọgụ a nwere ike imebi okwuntughe gị. Olileanya Apple na-arịba ma nwee ike ịchọpụta ụdị ozi ịntanetị ndị a na-akpaghị aka iji zipu ha ozugbo na folda spam n'ime ngwa ngwa ozi ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Kpachara anya maka mwakpo sitere na Phising dị ka Apple iji zuo data